ends.steep's Page - Myanmar Network
Telecommunication နှင့် Cyber Security (Ethical Hacking) သင်တန်းအကြောင်း
Telecommunication နှင့် Cyber Security (Ethical Hacking) သင်တန်းများကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် မကြာမီတက်ရောက်နိုင်တော့မည်။ ယခင်က Oversea တွင်သွားရောက်သင်ရသည့် Telecommunication နှင့် Cyber Security…Continue
M.S.T Computer Centre မှ September လတွင်ဖွင့်မယ့် တန်းခွဲသစ်များ
Section S.D Section Time DayENE 24/ 2011 21.9.2011 11:00-2:00 Mon~FriENE-25/ 2011 24.9.2011 …Continue
တက်ရောက်ခဲ့ဖူးတဲ့သင်တန်းတွေထဲမှ သဘောအရမ်းကျတဲ့ သင်တန်းတစ်ခုအကြောင်းမိတ်ဆက်လိုက်တာပါ
Started this discussion. Last reply by Aung Pyae Dec 30, 2011.3Replies2Likes
လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်ဝင် နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု ICT/ Network နည်းပညာရပ်များ စာသင်ကြားမှု ၁၂နှစ်ဖြင့် ကွန်ပျူတာ ICT/ Network ဘာသာရပ်တွေကို အထူးပြုသင်ကြားပြီး။ ကျောင်းသား၊ သူတွေအဘို့ Scholarship တွေ…Continue
ends.steep has not received any gifts yet
At 16:35 on April 29, 2011, su mon said…
At 11:32 on March 22, 2011, Win Myat said…
nice to meet u fri...
At 10:17 on March 22, 2011, Soe Thiha said…
At 8:45 on March 22, 2011, jasmine said…
Nice to meet u friend! Thanks for the add!